Ukubala Ukugxininisa - iiNyunithi kunye neMiphumo
Qonda iiNyunithi zokuThuthukiswa kunye neziPhulo
Ukubala ukuxilongwa kwesisombululo seekhemikhali isakhono esisisiseko bonke abafundi bekhemistry kufuneka bavelise ngokukhawuleza kwizifundo zabo. Yintoni ekugxilwe kuyo? Ukugxininisa kubhekisela kwisixa sokungqinelana esithe sichithwa kwi- solvent . Ngokuqhelekileyo sicinga ngesigxina njengesigxina esongezwa kwisisombululo (umzekelo, ukongeza isetyule ityuwa emanzini), kodwa i-solute yayinokuthi ibe lula ngokulula kwesinye isigaba. Ngokomzekelo, ukuba songeza inani elincinane le-ethanol emanzini, i-ethanol yinto engagqibekanga kwaye amanzi asisombululo.
Ukuba songeza inani elincinci lamanzi kwisixa esikhulu se-ethanol, ngoko ke amanzi ayenokuthi ayilwe!
Indlela yokubala iiNyunithi zoNyaka
Emva kokuba ufumene i-solute kunye ne-solvent kwisisombululo, ulungele ukujonga ingcamango yayo. Ukugxininiswa kunokubonakalisa iindlela ezahlukeneyo, ukusetyenziswa kwepesenti ngokubunzima , ipesenti zepesenti , i-fraction ye-mole , ukunyaniseka , ukusabalalisa , okanye ngokuqhelekileyo .
Ipesenti Ukubunjwa nguMisa (%)
Olu bunzima boluhlu luhlukaniswe ngobunzima besisombululo (ubuninzi be-solute kunye nobunzima be-solvent), buphindwe ngo-100.
Qinisekisa ipesenti eyenziwe ngobunzima be-100 g isisombululo setyuwa esine-20 g ityuwa.
20 isisombululo seNaCl / 100 g x 100 = isisombululo se-NaCl esingu-20%
Umthamo wepesenti (% v / v)
Ipesenti yeVolumu okanye i-volume / ivolenti yeepesenti isoloko isetyenziselwa xa kulungiswa isisombululo samanzi. Ipesenti yoMqulu ichazwe ngokuthi:
v / v% = [(umthamo we-solute) / (umthamo wesisombululo)] x 100%
Qaphela ukuba ipesenti zevolumu zihambelana nomlinganiselo wesisombululo, kungekhona umthamo wokusombulula . Umzekelo, iwayini malunga ne-12% v / v ethanol. Oku kuthetha ukuba i-12 ml ye-ethanol yonke i-100 ml yewayini. Kubalulekile ukuqonda i-liquid and gas volumes ayinakongeza. Ukuba uxuba i-12 ml ye-ethanol kunye ne-100 ml yewayini, uya kufumana ngaphantsi kwe-112 ml yesisombululo.
Njengomnye umzekelo. I-70% v / v yokuxuba utywala ingalungiswa ngokuthatha i-700 ml ye-isopropyl yotywala kunye nokongeza amanzi aneleyo ukufumana i-1000 ml yesisombululo (esingayi kuba ngu-300 ml).
I-Mole Fraction (X)
Le yile manani e-moles yenkomfa eyahlula ngenani lee-moles zazo zonke iindidi zeekhemikhali kwisisombululo. Gcinani engqondweni, isibalo sawo onke amaqhezu e-mole kwiisisombululo zihlala zilingana 1.
Ziziphi iinqununu ze-mole yeengxenye zesisombululo esakhiweyo xa i-g grolcerol engama-92 ixutywe ngamanzi angama-90? (isisindo somzimba samanzi = 18; isisindo somlinganiselo we-glycerol = 92)
90 g amanzi = 90 gx 1 mol / 18 g = 5 amanzi amanzi
92 g glycerol = 92 gx 1 mol / 92 g = 1 i-mollyolol
iphelele mol = 5 + 1 = 6 i-mol
x amanzi = 5 mol / 6 mol = 0.833
Ingqondo efanelekileyo ukujonga izibalo zakho ngokuqinisekisa ukuba amaqhezu e-mole ayongeza kwi-1:
x amanzi + x glycerol = .833 + 0.167 = 1.000
I-Molarity mhlawumbi iyunithi eqhelekileyo isetyenzisiweyo. Inani le-moles ye-solute nganye ngeyure yesisombululo (kungekhona ngokufanayo nomthamo we-solvent!).
Iyintoni ukuxhamla kwesisombululo esenziwe xa amanzi enyuka kwi-11 g yeC CaCl 2 ukwenza i-100 mL yesisombululo?
11 g CaCl 2 / (110 g CaCl 2 / mol CaCl 2 ) = 0.10 yeC CaCl 2
i-molarity = 0.10 mol / 0.10 L
i-molarity = 1.0 M
I-Molality yile nombolo ye-moles ye-solute nganye nge kilogram ye-solvent. Ngenxa yokuba ubuninzi bamanzi ngo-25 ° C bu malunga ne-kilogram nganye ngetitha, ukulaliswa kweentlupheko kufana nokulingana nomlinganiselo wokunciphisa izisombululo eziqhekezayo kwiqondo lokushisa. Oku kulungelelaniso oluncedo, kodwa khumbula ukuba kuphela ukulingana kwaye akusebenzi xa isisombululo sisebushushu obuhlukeneyo, asihlambululi, okanye sisetyenziselwa i-solvent ngaphandle kwamanzi.
Yintoni ukuxhamla kwesisombululo se-10 g neOH kwi-500 g amanzi?
10 g NaOH / (40 g NaOH / 1 i-NaOH ye-mol) = 0.25 i-NaOH ye-mol
500 g amanzi x 1 kg / 1000 g = 0.50 kg amanzi
ubumbano = 0.25 mol / 0.50 kg
I-molality = 0.05 M / kg
ulwalamano = 0.50 m
Ubunzima bulingana nesilinganisi esilingana negram yeekremu nganye kwikota. Isilinganisi esilingana nesigrama okanye isilinganisi sisilinganiselo somthamo osebenzayo we-molecule. Ubunzima kuphela yunithi yokugxininisa exhomekeke kuyo.
I-M M i-sulfuric acid (H 2 SO 4 ) i-2 N ye-acid-base reaction ngoba i-mole nganye ye-sulfuric acid inika ii-moles ezimbini ze-H + ioni. Ngakolunye uhlangothi, i-1 M i-sulfuric acid i-1 N ye-sulphate precipitation, kuba i-mole ye-sulfuric acid inika i-mole e-sulfate ions.
Iigra nganye ngeLib (g / L)
Le ndlela yindlela elula yokulungiselela isisombululo esisekelwe kwigram ye-solute nganye kwikota yesisombululo.
Isisombululo esisesikweni sichazwe ngokwemiqathango yesisindo somlinganiselo nganye ngeyure nganye yesisombululo.
Icandelo ngeMillion (ppm) kunye neNgxenye ngeBillion (ppb)
Isetyenziselwa izixazululo ezidityanisiweyo kakhulu, ezi zunithi zibonisa ukulinganisa kweengxenye ze-solute kwi-1 million yeziqendu zesisombululo okanye i-1 billion yeziqhamo zesisombululo.
Isampuli yamanzi ifumaneka i-2 ppm ekhokelayo. Oku kuthetha ukuba kuzo zonke izigidi zeengxenye, ezimbini zazo zikhokela. Ngoko, kwisampula enye yegramu yamanzi, iigrama ezimbini zezigidi ziza kubakhokelela. Kwizisombululo eziqhekezayo, ubuninzi bamanzi kuthathwa njenge-1.00 g / ml kule miyunithi yokuxinwa.
Indlela Yokubala Iingxaki
Uhlaziye isisombululo nanini na ungeze isisombululo kwisisombululo.
Ukongeza iziphumo zokusombulula isisombululo somxinaniso ophantsi. Unokubala ukuxubusha kwesisombululo emva kokuhlenga ngokusebenzisa eli lingano:
M I M i = M f V f
apho i M molarity, V ingumthamo, kwaye iincwadi zibhalela kwaye zibhekisela kwixabiso lokuqala kunye neyokugqibela.
Zingaphi ii-milliliters ezingama-5.5 ze-NaOH zifunekayo ukulungiselela i-300 mL ye-Nahara ye-1.2 M?
5.5 M x V 1 = 1.2 M x 0.3 L
1 = 1.2 M x 0.3 L / 5.5 M
1 = 0.065 L
1 = 65 mL
Ngoko, ukulungiselela isisombululo se-1.2 M ye-NaOH, uthele i-65 mL ye-5.5 yeM NaOH kwisitya sakho kwaye ungeze amanzi ukuze ufumane umthamo wokugqibela wama-mL 300
0.5M I-EDTA Solution Recipe
I-Centrifuge Inkcazo, iintlobo, kunye neendlela zokusebenza
Imibuzo yoVavanyo lweeMveliso zeComputer Form
Indlela yokufumana iSimboli se-Ion
I-Electrochemical Cell EMF Isibonelo Inkinga
I-Paragnetism kunye ne-Diamagnetism Yasebenza Ingxaki
Mbar ukuya kwi-atm - Ukuguqula ii-Millibars kwi-Atmospheres
U-US US Vula: Ukwenziwa kweMbali ngakumbi ngeJordan i-Spieth
Iingcebiso ezi-10 eziphezulu zokuthenga i-Car Certified Pre-owned Certified
'Imibuzo emangalisayo yoMnu Fox'
10 Amanqaku Ngeempawu
Indlela yokutshintsha i-Skateboard Bushings
Ngo-1962 US Open: 'U-Big Guy Uphelelwe Kwinqanaba'
Ukusebenzisa amazwana kwiRuby